Kutaura ku Earthquake Workhop, İmamoğlu ndiyo Chiteshi Istanbul Murder Project | RayHaber
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulKutaura ku Earthquake Workhop, İmamoğlu ndiyo Chiteshi Istanbul Murder Project
imamoglu chiteshi yakataura mukudengenyeka calistayin istanbul kuuraya chirongwa
Vachitaura kuIstanbul Earthquake Workhop, Meya weIstanbul Metropolitan Municipality Ekrem amomamoğlu akapihwa chirongwa che "Channel Istanbul". Achitaura kuti Canal Istanbul haingori basa rekufambisa yegungwa, Imamoglu akataura kuti chirongwa ichi chinosanganisira njodzi dzinogona kuchinja mamiriro ezvisikwa zveguta nemagungwa uye pagungwa.
Am Mabhachi, mabheseni, nzvimbo dzekurima, nzvimbo dzekugara, nzira yemvura yepasi uye hurongwa hwese hwekutakura hweguta hwakakanganiswa zvakanyanya nebasa iri. Kunze kwekuparadzwa kwenyika yekurima, chitsuwa ichi chichaumbwa pakati peStrait yeIstanbul uye chiteshi chitsva kuti chivhurwe, mamiriro ekusungwa kwehuwandu hwe8 mamirioni anomuka. Nechirongwa ichi chisina kujairika, mamirioni 8 achasungwa munzvimbo ine njodzi yenyika. " İmamoğlu akataura kuti nzvimbo dzakawanda dzekukwezva, maguta, mafekitori, zvikoro uye mabasa zvinogona kugadzirwa nemari yekushandiswa paKanal İstanbul ndokuti, Ndechimwe nyaya here kuti mamirioni evagari pamuganhu wenzara anogona kushandirwa mumaguta avo nemamisha. Muchidimbu, chirongwa ichi hachisi kunyange chirongwa chekutengesa kuIstanbul. Zviri pamutemo chirongwa chekuuraya. Iro basa risingafadzi renjodzi kuIstanbul. Kana chirongwa ichi chapera, Istanbul ichange yapera ..
Iyo "Earthquake Workhop ğı, iyo inobata nenyaya yekudengenyeka, imwe yenjodzi huru pamberi peIstanbul, yakatanga kuIstanbul Congress Center. Tayfun Kahraman, Musoro weDhipatimendi reNyika Kudengenyeka Risk Management uye Urban Improvement, Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) yakaita hurukuro yekutanga kumusangano uchaitwa pakati paZvita 2-3 Zvita. Kahraman, ipapo iyo microphone Ekrem İmamoğlu IMM Mutungamiri, Istanbul, nekuda kwenzvimbo dzakakanganisika neimwe yengozi yepasirese yekudengenyeka kwenyika yakatangwa pane yakamanikidzwa. Mune ino musangano, İmamoğlu akataura kuti ivo vakaungana kuti vagadzire mamepu akajeka eguta. Imamoglu akataura kuti munguva yakapfuura, zvinhu hazvina kushanda zvachose kana kuti hazvina kushanda sezvavaifanirwa kuita, gerekti Kune, hongu, zvikonzero zvakasiyana nei zvinhu zvakamira kana kusvika pakumisa. Asi chikonzero chakakosha hachisi 'Isu' asi 'ini' iri chimiro cheya manejimendi, "Ndinoziva" nzira inzira Kunzwisiswa kwenzwi uye kuda kwerudzi. Naizvozvo, kubva pazuva ratakasvika pakutonga, takatanga maneja uyo waizounganidza pfungwa dzakajairika. Takatanga kuita mashopu nezveese nzvimbo yehupenyu uye zvese zvinodiwa neIstanbul. "Tinounza pamwe vanhu vakafanira, nyanzvi, vatinoshanda navo uye vanobatsirwa."
EN ZVINOKOSHESA ZVAKAWANDA ZVEBASA RENYAYA TATakabatsira NESATSI "
Imamoglu akataura kuti guta harifanire kuve nzvimbo yejigsaw, nokudaro, kuzvitonga kuzere, pfungwa nesainzi, vakasimbisa kuti vakatungamira. İmamoğlu akataura kukosha kwechiitiko ichi nemazwi anoti "Zvinonyanya kukosha semashopu atakaita kusvika zvino,, nekuti birincil Basa rekutonga kwemasipureta uye meya ndere kuona kuchengetedzwa kweupenyu uye zvinhu zvega zvega mugari weguta. Saka iwe unogona kutanga, ipapo zvinhu. Zvinodiwa, mapurojekiti uye mabasa munzvimbo dzese dzese anogona kungouya mushure mazvo. Kune rimwe divi, kune nzvimbo dzakawanda zvekuti izvo zvaunoita munzvimbo idzi, kuedza kwakawanda sei kana zvaunowana zvinowanzova zvisina kujeka. Hazvizivikanwe chaizvo. Hazvikoshese. Chokwadi, hazvigoneke kubatanidza vashandi, nguva nezviwanikwa zvaunoshandisa munzvimbo idzodzo. Kudengenyeka kwepasi uye kugadzirira kwenjodzi ndeimwe yenzvimbo idzodzo .. Zvisinei, uye chete paunosangana nerunyararo kana njodzi, hwakawanda sei hwawakaronga kare, maitiro uye kuponeswa kwehupenyu kunonzwisiswa. Zvichida izvi ndizvo zvinoita kuti vezvematongerwo enyika, kunyanya vezvematongerwo enyika, vasateerere zvakanyanya kuminda iyi. Sezvo ivo vanofuratira iyo nyaya yekudziya kwepasirese uye kabhoni dioxide. Isu hatisi verudzi rwematongerwo enyika, "akadaro. Vachitaura nezvebasa ravo mukudengenyeka panguva yeBeylikdüzü Meya ormamoğlu, akati:
PR KUDENGA KWENYAYA IYO KUKOSHA KUKOSHESA KWENYAYA IYI '
“Hatigone kuisa misoro yedu mujecha. We inoruma. Njodzi inonyanya kukosha yeguta rino kudengenyeka. Uye iyi njodzi haisi diki njodzi. Uyezve, iyi njodzi haisi chete njodzi yeIstanbul. All Turkey pangozi. Tiri kutaura nezve mukana wekusagadzikana kukuru uye njodzi yenyika iyo hupenyu ichamira uye hupfumi huchatambura zvakanyanya kukuvara. Tiri kutaura pamusoro pengozi yakakura yakatarisana nezvino 1.2 mamiririri zvimiro. Tiri kutaura pamusoro pengozi yekuti zvivakwa zviuru zve48 zvichakuvadzwa zvakanyanya uye makumi ezviuru zvevagari vafa. Naizvozvo, sekutonga kutsva, chinangwa chedu chikuru ndechekuita Istanbul guta rinorwisa njodzi uye kunyanya kudengenyeka. Chinangwa chedu chakawanda ndechekugadzira mugwagwa nekufunga nezve zvese mhinduro dzesainzi pamwero wepasi rese nenyika. "Tinoda kutsvaga nzira yakavakirwa pasainzi data uye nekufunga maonero evatori vehukama vatore matanho."
Imamoglu akaona kuti Istanbul yakarasikirwa nenguva yakawanda mukudengenyeka uye akati, nasıl Nharaunda ingave sei pasi penjodzi yakakura kudaro kuti irege kufuratirwa? Handina basa nazvo. " Vachitaura kuti havachadi kutambisa imwe nguva, İmamoğlu akati, hepsi MaYunivhesiti ese, masangano, asiri ehurumende, masangano epakati uye epasiremende emuno; kugona, kudzidziswa uye hunyanzvi. Wese munhu anofanirwa kutora chikamu mune zvese zvekudzivirira uye kugadzirisa maitiro. Nekuti ndiko kukurudzira.
SA KANA UCHINOGONA BHAIBHERI, UNOGONA SEI KUTI? "
Kunyange paine nyaya yaipisa sekudengenyeka, İmamoğlu akatsoropodza chirongwa che "Channel Istanbul" uye akawedzera, ini ndinoda kubvunza vese veIstanbulites: Kana uine bhajeti shoma, iwe unoshandisa sei iyo bhajeti? Kana iwe uchinetseka mukuwana chikafu chekupa nhengo dzemhuri yako. Kana iwe usina mari yakakwana yekupa nekudzidzisa vana vako munzira yakanaka uye ine hutano. Ungaenda muchikwereti kutenga zvisina kufanira uye yakasarudzika fenicha mumba mako kana iwe waizokwereta kubhengi woenda kuzororo? Semhuri, baba, amai, mune hanya neiko pamunoronga kushandisa yenyu bhajeti? Kana iwe uri mutengesi, mutengesi, muzvinabhizinesi, unozvibata sei? Sevatengesi vakangwara, vatengesi kana vatengesi vane mabhizinesi, iwe unotenga yachts pamwe nekuwina kwako? Kana kuti urikuda kuita mainvestment anozoponesa kambani yako ”. Achitaura kuti mhinduro dzemibvunzo iyi ndedzechokwadi, İmamoğlu akati:
MUNOGONA TINOGONA KUVIMBIRA HERE?
Sorumlu Vanozvidavirira vabereki vane mashoma mabhajeti vanofunga vane mutoro bhizinesi vanhu gumi vasati vashandisa pendi imwe neimwe. Buttermilk haina kuita senge inonzi rudzi rwemunhu rwunotanga kunwa. Asi sei mutungamiriri weveruzhinji akachenjera, wezvematongerwo enyika akachenjera, akaronga kushandisa mari yeruzhinji? Haisi iyo kukosha pamberi pekuvandudza hupenyu hwehupenyu murudzi, basa, kugadzirwa, dzidzo uye hutano? Iwe uchapedza zviwanikwa zverudzi pane chiroto chisingabviri? Pave paine hurukuro nezve chirongwa cheChannel Istanbul muguta rino kwenguva. Vakambotibvunza here? Vakawana here mafungiro edu? Mazana ezviuru zvevadiki, vechidiki, 4 mamirioni vane vanhu vasingashandi uye vanopererwa. Kana vanhu vese ava varombo. Nezvigadzirwa zvese zvinodiwa. Kana pane kudikanwa kwekuvaka mafekitari mazhinji. Vana veguta rino re16 mamirioni, iro ramangwana reguta guru iri, havagone kudyisa zvakakwana. Nepo chikamu chakayerwa kwazvo chisingagone kugamuchira chikoro chedzidzo. Patinodzidza mumakirasi ane vanhu vakawanda, isu tingave pekutanga Kanal İstanbul? "
Achitaura kuti Canal Istanbul haingori basa rekufambisa yegungwa, Imamoglu akataura kuti chirongwa ichi chinosanganisira njodzi dzinogona kuchinja mamiriro ezvisikwa zveguta nemagungwa uye pagungwa. İmamoğlu akarongedza idzi njodzi mukutaura kwake seizvi:
Proj Iyo purojekiti inokanganiswa zvakanyanya nemadziva, mabheseni, nzvimbo dzekurima, nzvimbo dzekugara, nzira yemvura yepasi uye chirongwa chose chekufambisa cheguta. Kunze kwekuparadzwa kwenyika yekurima, chitsuwa ichi chichaumbwa pakati peStrait yeIstanbul uye chiteshi chitsva kuti chivhurwe, mamiriro ekusungwa kwehuwandu hwe8 mamirioni anomuka. Neprojekiti iyi isina kujairika, mamirioni 8 achasungwa munzvimbo yakanyanya kudengenyeka kwenyika. Iko hakuna mamiriro munyika ayo anoendesa huwandu hwakadai kune imwe geography panguva yekudengenyeka. Irwo rudzii rwepurojekiti iri nekuda kwaMwari? Chikonzero ndechipi? Tarisa, chiteshi chiri muchirongwa chingangoita 45 makiromita akareba, 20,75 metres yakadzika uye chikamu chakatetepa 275 mita yakafara. Chiteshi chinopfuura neSazlıdere uye Terkoz Basins. Mune mamwe mazwi, chirongwa ichi chinoparadza Sazlıbosna neTerkoz Basin Nzvimbo. Inotakura njodzi yemvura yepasi uye munyu weTerkoz Lake. Zviri pachena kuti Istanbul inotyisidzira zvikuru kudikanwa kwemvura yekunwa. Ichi chega chikonzero chikonzero chakakwana kuti urege kuita chirongwa ichi! Vanhu veIstanbul vachanwa mvura yegungwa here? Kune rimwe divi, chirongwa ichi chichaunza 1,1 mamirioni ehuwandu huwandu kudunhu. Nekuda kweiyo purojekiti, 6 ichagadzira mamirioni mafambiro matsva. Istanbul traffic ichawedzera inosvika muzana 5. 3.4 miriyoni mativi mativi masango nzvimbo, 10 mamirimita emamirimita nzvimbo yekurima ichaparadzwa. Panenge pasina Sazlıdere Damu. Iyo State Hydraulic Works (DSI) saka yakapa chirevo chisina kunaka kuchirongwa. Maererano neshumo, 23 yemabhawa emvura anosangana nezvinodiwa nemvura achaparadzwa. Nekuvakwa kwechiteshi kuchave kwakakura kuchera. Sekureva kweTRMOB mushumo, 136 ichave nemamiriyoni emamiriyoni emakubhiti ekuchera. Zuva rega rega 29 zviuru zvekuchera marori zvichapinda muIstanbul traffic. Hazvizivikanwe kuti kuchera kwacho kuchawira kupi! Kuchera kwekuchera, semuenzaniso; Kana Güngören-Esenler-Bağcılar akadyara pamusoro penzvimbo idzi, matunhu aya achakwira anenge 2.1 metres. "
"IZVO ZVINONYANYA KUTI ISTANBUL BOSPHORUS TRAFFIC!"
1., 2., Uye 3. dhigirii munharaunda yekudengenyeka inoratidza kuti Imamoglu, "11 makiromita kubva kuNorth Anatolian Fault, 30 makiromita kubva kuCinarcik Fault inopfuura. Masayendisiti anoti iyo Channel Istanbul Project ichakanganisa pasi uye pasi pekumanikidzwa kusagadzikana, uye kuwanda kuzadza kuchadana kudengenyeka kwenyika nyowani. Kuchengetedzwa kwemucheka wepamberi weBosphorus kunorondedzerwa sechikonzero cheprojekiti. Nekudaro, pamwe neprojekti, 17 inokanganisa SIT nharaunda yemamirimita emamirimita. Bathenoa Guta Rekare kumahombekombe kweKüçükçekmece Lake uye Yarımburgaz Cave inova imwe yemagariro ekutanga ari munharaunda yekuvaka. Ndinoda kukwevera tarisiro yako kuBosphorus traffic. Mufaira rekushandisa reEIA, sekutaurwa muBosphorus traffic, hapana kuwedzera kana tichienzanisa nemakore, asi pane izvozvo, kuderera kwe10 muzana kunyanya mugore rekupedzisira re22,46 ”. Vachitaura kuti kusagadzikana hakuzogumiri kuIstanbul, İmamoğlu akasimbisa kuti Marmara Gungwa uye Dunhu zvakare vari munjodzi huru:
"Nzvimbo yakaorera kwazvo yekurima uye musango ye 45 makiromita akareba neyakaenzana 150 mita yakafara ichabviswa zvachose. Sezvo Istanbul Peninsula ichasiya Thrace, mabhiriji matsva ekubatanidza anozodiwa. Nekuda kwekusabatana kunobva kune Gungwa Dema kusvika kuGungwa reMarmara, Gungwa reMarmara richasvibiswa zvakanyanya. Aya mamiriro ezvinhu anokanganisa hupenyu hwehupenyu hweMarmara Sea pamwe nehove nevanhu vanogara mubhizinesi iri. Iyo chiteshi ichakonzerawo shanduko yemamiriro ekunze. Pamwe chete nenyika yakaparadzwa, mhuka dzesango ipapo dzichaparadzwa. ”
"IYO CHEMA CHOKWADI PAKASANGANWA, ISTANBULI INOGADZWA"
İmamoğlu akataura kuti nzvimbo dzakawanda dzekukwezva, maguta, mafekitori, zvikoro uye mabasa zvinogona kugadzirwa nemari yekushandiswa paKanal İstanbul ndokuti, Ndechimwe nyaya here kuti mamirioni evagari pamuganhu wenzara anogona kushandirwa mumaguta avo nemamisha. Muchidimbu, chirongwa ichi hachisi kunyange chirongwa chekutengesa kuIstanbul. Zviri pamutemo chirongwa chekuuraya. Iro basa risingafadzi renjodzi kuIstanbul. Kana chirongwa ichi chapera, Istanbul ichapera. Iri guta rinoshamisa richava guta risingagadzikike. Mhepo yakachena, zvigadzirwa zvemvura zvinosara zvoga nematambudziko asingagadziriswe maererano ne traffic. Kunyange iyo Bosphorus kuyambuka kana iyo yegungwa yegungwa inoyerera kuyambuka, zvakare haina kukosha mune zvehupfumi. Yakanga yakagadzirirwa chete kugadzira nzvimbo itsva dzearenda, uye mhedzisiro yayo yekuparadza haina kumbofungwa. Isu hatigone uye hatibvumiri kuparadzwa kwenzvimbo dzakasikwa, nzvimbo dzekugara nemadhishi emvura eguta rino rekare kana mumwe munhu akaita mari. Isu tichadzivirira kukanganisa nehunyanzvi hwako, kunzwa nekushinga.
Nepfungwa dzako dzakajairika, tichaita kuti guta redu rive rakachengeteka, riwedzere kuwanda uye rinokwezva kwemamiriyoni e16. Ndatenda, iva ipapo ”.
Vatambi vehunyanzvi, 2-3 ichaitwa pakati paZvita kuti vagare, nyaya yekudengenyeka muIstanbul ichaisa mari.
KOS: 3. Airport haina kutakurwa, haina Istanbul…
Murder Plan Yakavhiringidzwa kuburikidza neMichina-Inotarisira Kuchengetedza
Imamoglu: 'Ini ndinoda Kukurukura Channel Istanbul na Erdogan'
Meya İmamoğlu: 'Haydarpaşa naSirkeci Chitima Chiteshi'
Mutungamiri İmamoğlu kuIstanbul Airport Havaalanı